8pcs Impact Copper Bottom Cookware Set This cookware set is very elegent and practical ,high-gloss ခန္ဓာကိုယ်,encapsulated သားညှပ်ပေါင်မုအခြေစိုက်စခန်းအမြန်အပူနှင့်ဒယ်အိုးတစ်လျှောက်လုံးပြီးပြည့်စုံသောအပူဖြန့်ဖြူး. The Inside of panhas…
8pcs Impact Bottom Cookware Set This cookware set is very elegent and practical ,high-gloss ခန္ဓာကိုယ်,encapsulated သားညှပ်ပေါင်မုအခြေစိုက်စခန်းအမြန်အပူနှင့်ဒယ်အိုးတစ်လျှောက်လုံးပြီးပြည့်စုံသောအပူဖြန့်ဖြူး. The Inside of panhas deailed…
3PLY BODY COPPER CLAD FRYPAN This frypan is made of 3-ply composited material copper clad with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး, inner with Non-stick,different sizes…
13PCS 3PLY COPPER CLAD BODY COOKWARE SET This cookware set is made of 3-ply composited material copper clad with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး, This…
5Ply All Clad Steel 17pcs Rolled Edge Cookware Set This set is made of 5-ply composited material steel clad with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး,…
15pcs Wide Rolled Edge Cookware Set–sc511 This set is very elegent and practical ,သော induction သဟဇာတ. ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်. မော်ဒယ်နံပါတ်: SC511 Place Of Origin: ဂွမ်ဒေါင်း, China Material: Metal Thickness: 1.0MM…
KA313 High Quality Kitchen Tools The Kitchen tool with new design is more human, safe and creative, out looking is more perfect. မော်ဒယ်နံပါတ်: KA313 Place Of Origin: ဂွမ်ဒေါင်း, China Material:…